राष्ट्रियसभा निर्वाचनः कुन प्रदेशमा कति मत खस्यो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more राष्ट्रियसभा निर्वाचनः कुन प्रदेशमा कति मत खस्यो ?
माघ ९ गते, २०७६ - १५:१०
कास्की । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन २०७६ अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा मतदान जारी रहेको छ । आज बिहान १०ः०० बजेदेखि साँझ ४ः०० बजेसम्म जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीको परिसरमा मतदाता मतदान गरिरहेका छन् । मतदानका लागि गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका ११ वटै जिल्लाबाट अधिकांश मतदाता बुधबार नै आइसकेका थिए ।
राजनीतिक दललेसमेत आफू निकट मतदातालाई अनिवार्यरुपमा निर्वाचनमा सहभागी बन्न निर्देशन दिइसकेका छन् । गण्डकीमा ‘अन्य समूह’ र ‘महिला समूह’तर्फ गरी दुई पदका लागि हुने निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य ६० र ८५ स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख १७० गरी २३० मतदाताले भाग लिनेछन् । निर्वाचनका लागि दुई मतदान केन्द्र तोकिएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख महेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभा सदस्यको एक मत बराबर ४८ मतभार रहेको छ भने स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको एक मत बराबर १८ मतभार रहेको छ । प्रदेशसभाको दुई हजार ८८० र स्थानीय तहको तीन हजार ६० गरी कूल ५९४० मतभार गण्डकीमा छ ।
निर्वाचनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली काँगे्रसले ‘अन्य समूह’ र ‘महिला समूह’दुवै पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले ‘अन्य समूह’ तर्फमात्र उम्मेदवारी दिएको छ । नेकपाबाट पार्टीका केन्द्रीय सचिवलाय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘अन्य समूह’बाट र महिलातर्फ भगवती न्यौपाने उम्मेदवार हुनुहुन्छ । काँग्रेसले सूर्यप्रसाद रेग्मी र विमला गौचनलाई उम्मेदवार बनाएको छ । जनमोर्चाबाट ‘अन्य समूहमा’ शङ्कर बराल उम्मेदवार रहेका छन् ।
जनकपुरधाम : प्रदेश नं २ मा निर्धारित समयदेखि मतदान शुरु भएको छ । महेन्द्रनारायण संस्कृति केन्द्र जनकपुरको परिसरस्थित मतदान केन्द्रमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मतदान गरे । मतदान गर्न प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखका साथै गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित रहेका छन् । मतदानका लागि दुई वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ ।
घोराही स् राष्ट्रियसभाको निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश ५ को मतदान अहिले दाङमा चलिरहेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यलाई मतदान गर्नका लागि अहिले प्रदेशका १२ जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुख र अध्यक्षरउपाध्यक्ष मतदान प्रक्रियामा भाग लिइरहेका छन् ।
दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका प्रमुख एवं मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाका अनुसार मतदानका लागि दुई वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । थापाका अनुसार ‘क’ मतदान केन्द्रमा प्रदेशसभा सदस्य र ‘ख’ मतदान केन्द्रमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गरिरहेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० र नेपाली काँग्रेसबाट तीन/तीन जनाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक जनाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
प्रदेश नं ५ मा नेकपाले अपाङ्गबाट जगप्रसाद शर्मा, महिला सदस्य विमला घिमिरे र अन्यबाट गोपाल भट्टराई चुनावी मैदानमा उतारेको छ । काँग्रेसले महिला सदस्यमा गिरीजादेवी न्यौपाने, अल्पसङ्ख्यक सदस्यमा मेहराज अहमद हलुवाई र अन्यबाट बालकृष्ण पाण्डेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । समाजवादी पार्टीबाट अल्पसङ्ख्यक सदस्यमा सुनिल सिंघल र अन्यबाट कृष्णप्रसाद यादव रहेका छन् । यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट शिवप्रसाद पौडेल उम्मेदवार रहेका छन् । उनका अनुसार निर्वाचनमा प्रदेशसभाका ८७ सदस्यको ४१७६ मतभार रहेको छ भने स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख २१८ को ३९२४ रहेको छ ।
डोटी: राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनअन्तर्गतको मतदान कार्यक्रम बिहान १०ः०० बजेदेखि यहाँ शुरु भएको छ । मतदान कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका प्रदेशसभा सदस्य ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष १७६ गरी कूल २२९ मतदानमा सहभागी रहेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत विदुर काफ्लेले जानकारी दिए ।
राष्ट्रियसभामा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट रिक्त रहेको दुई पदमध्ये एक महिला तथा एक पुरुषको उम्मेदवारी रहेको मुख्य निर्वाचन आयोगको कार्यालयले जनाएको छ । दुई मतदान केन्द्र रहेको निर्वाचनमा सोही स्थानमा ‘क’ र ‘ख’ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको जिल्ला सुरक्षा समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले जानकारी दिए ।
सत्तारुढदल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का तर्फबाट अछामका तारामान स्वाँर, कैलालीकी शारदा भट्ट र नेपाली काँग्रेसबाट कैलालीकै तुलसी देवकोटा तथा बैतडीका प्रताव ठगुन्नाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत काफ्लेले जानकारी दिए ।
विराटनगर: राष्ट्रियसभाको तीन पदका लागि आज शुरु भएको निर्वाचनमा प्रदेश नं १ मा अहिलेसम्ममा कूल ३४९ मत खसिसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय तहबाट १३० महिलासहित २६५ र प्रदेशसभाका सदस्यतर्फ २९ महिलासहित ८४ ले मतदान गरिसकेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी तीर्थ अधिकारीले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सभामुख प्रदीप भण्डारी, उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले मतदान गरिसकेका छन् ।
माघ ९ गते, २०७६ - १५:१० मा प्रकाशित